Fifaninanana Lahatsary: Dizitaly Mifamàka amin’ny Andavanandro · Global Voices teny Malagasy
Fifaninanana Lahatsary: Dizitaly Mifamàka amin'ny Andavanandro
Voadika ny 26 Janoary 2012 7:03 GMT
Ny Centre for Internet & Society (CIS), India, sy ny HIVOS any Pays-Bas dia mampiantrano ny Fifaninanana Lahatsary Digital AlterNatives 2011 ho ampahany amin'ny tetikasan'ny ‘Digital Natives with a Cause’. Mirona manodidina ny fotokevitra “Dizitaly Mifamàka amin'ny Andavanandro” ary mangataka ireo mpandray anjara mba hizara tantara amin'io izay mahatonga ny fiainany andavanandro ho “dizitaly”.
Anatin'ity tontolo maoderina ity dia mampiasa ireo fitaovana dizitaly sy ireo singa ary mieritreritra amin'ny fomba Dizitaly isanandro isika. Miaina ny fiainana Dizitaly isika amin'ny fihetsehana dizitaly – manindry foana, manome rohy, manamarika sy Mitia. Lalana iray ho anao hitantaràna ny tantaranao “Ny zavatra mahatonga ny fiainanao ho mendrika ny tsindry?”
Misokatra ho an'ny rehetra ny fifaninanana – matihanina, mbola vao misondrotra – afaka manao izany ny tsirairay eran-tany. Tsy misy fetran-taona farany ambony na farany ambany. (antsipirihany eto)
Tsindrio ny sary mba hahangeza ny peta-drindrina.
Hizotra anatinà dingana efatra ity fifaninanana ity. Anatin'ny dingana voalohany, handefa ny famintinana ny tantarany alohan'ny 26 Janoary 2012 ireo mpifaninana, manome ny antsipirihany mikasika ny lahatsariny ary ny aingam-panahy nanosika ny tantarany. Ho tsarainà vondrona mpitsara izay hifidy ireo hevitra 25 hiakatra ho amin'ny dingana faharoa. Ho fidian'ny vahoaka ilay lisitra ary ireo folo voalohany be mpitia indrindra no ho voafidy. Farany, haka ireo lahatsary roa tsara indrindra amin'ireo folo ireo mpitsara.
Hahazo marim-pankasitrahana mitentina 500 EUR tsirairay avy ireo 10 voalohany ary hahazo tombotsoa amin'ny fandraisana anjara anatinà fijerena sarimihetsika any amin'ireo Fioben'ny CIS any Bangalore. Hahazo marim-pankasitrahana marobe ireo mpamokatra lahatsary roa tsara indrindra.
Iangaviana ianao hametraka ny tolo-kevitrao amin'ny alàlan'ny “Online Application Form” alohan'ny 26 Janoary 2012.
Ity misy lahatsary iray novokarin'ny Sekoly garabolan'i Harry McKillop, Melissa, Texas, mba hanehoana fa ireo dizitaly mifamàka amin'ny andavanandro dia mangetaheta fitarihana sy lalana mba hanandramana ireo fitaovana vaovao anànana.